Guri ku hay
Isbarbar dhig taxadarro
Shimbirta dayactirka maalinta
Liiska Warbixinta Peter ee liiska
Maamul nolosha waayeelka
Ka raadi raadinta
Ku darso Avibase
Xubnaha kooxda Flickr
Warbaahinta ayaa dooneysay
Avibase waxaa sidoo kale lagu heli karaa luqadaha soo socda:
Ku darso tarjumaad wanaagsan
Tarjumaadda boggaan waxaa lagu dhammeystirey gacan-ka-beddelka qalabka turjumaadda ee Google. Ku darso tarjumaad wanaagsan
Soo dhawee Marti | Gali | Diiwaangeli | | myAvibase | Ka bax
Avibase siyaasadda asturnaanta
Avibase waa shabakad aan ganacsi ahayn oo lagu martiqaaday Kanada, taas oo ah mid si gaara u go'aamisa in la uruuriyo lana wadaago macluumaadka ku saabsan shimbiraha aduunka. Avibase ma ururiyo ama u isticmaalo macluumaadka shakhsiyeed ee ku saabsan isticmaalayaasheeda iyo martida ujeedooyin ganacsi. Si kastaba ha ahaatee, doe waxay soo aruuriyaan qaar ka mid ah macluumaadka shakhsiyeed ee ay u adeegsato siyaabaha soo socda.
Marka hore, bogaga u baahan aqoonsiga isticmaalaha (login iyo password, sida myAvibase iyo qalabka adeega shabakadda Avibase), waxaan ku kaydin karnaa oo ku yaala kumbuyuutarka oo kaliya ujeedada ilaalinta casharkaaga. Haddii aad abuurto astaanta shakhsiyeed ee Avibase, magacaaga, cinwaankaaga emailkaaga, luuqada iyo doorbidyada kale, iyo sidoo kale liiskaaga aragtiyada la xidhiidha liiska warbixintaada, waxaa lagu keydin doonaa xafiisyadayada. Macluumaadkan looma wadaagi doono qaybaha sadexaad waxaana loo isticmaalaa ujeedada aqoonsiga inta lagu jiro isticmaalka goobta Avibase. Magacaaga waxaa lagu soo bandhigi karaa natiijooyinka dadweynaha (tusaale, warbixinta kormeerayaasha ugu sareysa), laakiin waxaad codsan kartaa in lagaa saaro magacaaga profile. Sidoo kale, waad wici kartaa, wakhti kasta, ka tirtir macluumaadkaaga iyo dhammaan macluumaadka la xidhiidha, adoo tagaya qariiradaada Avibase adoo gujinaya "Delete profile".
Avibase sidoo kale waxay isticmaashaa Google Analytics, adeegga falanqaynta webka ee ay bixiso Google, Inc. Google Analytics wuxuu isticmaalaa cookies, kuwaas oo ah faylasha qoraalka lagu rakibay kombiyuutarka, si aad uga caawiso websaydhka sida user users u isticmaalaan goobta. Macluumaadka soo saareeyey ee ku saabsan isticmaalka websiteka (oo ay ku jiraan cinwaankaaga IP, inkasta oo tani ay tahay mid xadidan sababtoo ah waxaan ku tiirsanahay qaabka magac-bixineed ee IP-ga) waxaa loo gudbin doonaa oo lagu keydiyaa Google on server-yada Mareykanka. Google wuxuu u isticmaali doonaa macluumaadkan ujeedada qiimeynta isticmaalkaaga internetka, ururinta warbixinno ku saabsan waxqabadka shabakadda ee ku shaqeeya boggaga internetka iyo bixinta adeegyo kale oo la xiriira isticmaalka internetka iyo isticmaalka internetka. Google ayaa sidoo kale u wareejin kara macluumaadkan dhinaca dhinacyada saddexaad halkaasoo looga baahan yahay in ay sharcigaas sameeyaan, ama marka ay dhinacyadu saddexaad u xawilaan macluumaadka Google. Google ma'aha cid kale oo la xariira cinwaanka IP-gaaga wixii macluumaad kale oo ay qabtaan Google. Waxaad diidi kartaa isticmaalka cookies adoo dooranaya goobaha ku habboon ee shabakadaada, si kastaba ha ahaatee fadlan ogow haddii aad sidaan sameyso waxaad awoodi kari weydo inaad isticmaasho adeegga buuxa ee boggan. Adigoo isticmaalaya boggaan, waxaad ogolaaneysaa falanqeynta macluumaadka adiga kugu saabsan ee Google sida habka iyo ujeedooyinka kor ku xusan.
Inta badan waxaan isku dayaa inaan magacayga ku aqoonsado dhamaanba ku-biirayaasha ' kaas oo iga caawiyay horumarinta Avibase sanadihii la soo dhaafay. Haddii magacaagu kuugu muuqdo qirashooyinka, laakiin aad jeclaan lahayd inaad ka saarto, fadlan si sahlan u riix " ila soo xiriir" . Haddii aad dareensan tahay in magacaagu yahay inay halkaas joogaan, fadlan sidoo kale ii sheeg, taasi waa hubaal inta badan hubinta qaybtayda (raali gelinimadayda!).
Avibase waa copyright ee Denis Lepage. Ogolaashaha waxaa si toos ah loo siiyaa inuu isku xiro mid kasta oo ka mid ah boggaga goobta, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, bogagga baayacmushtarka gobolada iyo noocyada profile.
Sawirada iyo sawirada lagu soo bandhigay gudaha Avibase dhamaantood waa mid macaamil ka ah qoraaga asalka ah, haddii aan si kale loogu sheegin calaamadda rukhsada. Dhamaan sawiryada lagu soo bandhigay Flickr API waxay ku jirtaa hantida asalkooda asalka ah. Avibase ma haysan xarun sawirro ah oo ka mid ah API, laakiin waxay ku xiran tahay xiriirinta sawirada masawirada. Dhammaan sawirada waxaa ku jira magaca qoraaga (sida lagu bixiyo Flickr) waxayna ku xiran yihiin bogga qoraaga ee Flickr. Kaliya sawirro lagu calaamadeeyay baaritaanka dadweynaha ay qorayaashooda ku muujiyeen Avibase. Tani waa mid caadi ah oo ku yaala Flickr, oo laga beddeli karo akoonka xisaabta.
Haddii aad tahay sawir qaade leh xisaabta Flickr, oo aad jeclaan lahayd inaad codsato in sawiradaada aan lagu soo bandhigin sawirada yar yar ee Avibase, waxaad leedahay ugu yaraan 2 ikhtiyaar. Marka hore, waxaad la xiriiri kartaa si aan u waydiisanno in sawiradaada aan la soo bandhigin, waana ku faraxsanahay inaan ku qasbo sida ugu dhaqsaha badan. Markaad sidaa sameysid, fadlan sidoo kale u sheeg magacaaga xisaabtaada flickr, si aan u aqoonsado oo u dhiso fiilo si looga hortago in sawiradaada laga soo bandhigo. Xulashadaada labaad waa inaad bedesho hantida sawirada qaar ama dhammaan sawiradaada si aysan u helin "i i" raadinta dadweynaha . Tani waxaa loo samayn karaa si caalami ah oo ku jira xisaabtaaga Flickr, adigoo ka hooseysa Khusuusiyaadka iyo ogolaanshaha , ama sawir kasta oo shakhsi ah. Ka dib markaad bedesho goobtan, sawirada waxaa laga yaabaa in lagu muujiyo sida aanad heli karin Avibase, ugu dambayntii waa laga saari doonaa.
Sawirrada laga soo qaaday banner Avibase ayaa loo isticmaalay ruqsad ka haystayaal haysta xuquuqda daabacaadda, kuwaas oo sida caadiga ah lagu aqoonsan yahay in ay jiidhkaaga ka saareen mid ka mid ah sawirada ama gujinaya sawir.
Oggolaanshaha in la isticmaalo mid ka mid ah sawirada lagu soo bandhigay Avibase aniga laftigayga lama siin karo waana inaan si toos ah loogu codsan qofka haysta. Qaar ka mid ah sawirrada Flickr ayaa loo heli karaa si loogu isticmaalo Sharciga Creative Commons, laakiin waa masuuliyadaada inaad isticmaasho user si aad u hubiso midkaa iyo in lagu dhaqmo shuruudaha shatiga gaarka ah. Macluumaadkan waxaa laga heli karaa bogga Flickr markaad riixdo sawir.
Haddii aad haysato sawirro aad jeceshahay in aad ka heli karto Avibase, waxaad u baahan tahay inaad sameyso waxaad sawiradaas ka heli kartaa Flickr, iyo hubi in profile kuu ogolaanayo raadinta gaarka ah.
Soo sheegida waxyaabaha aan habooneyn
Haddii aad jeclaan lahayd inaad soo sheegto sawir aan habooneyn oo lagu soo bandhigay Avibase, habka ugu wanaagsan haddii aad riixdo calaamada yar ee ku taal kore ee ku taal geeska bidix ee hoos ku yaala mid ka mid ah sawirada. Isticmaalka badhanka waa in lagu xaddidaa khaladka iyo sawirada aan matalaya shimbiraha. Sawir kasta oo lagu tilmaamayo habkan ayaa ugu dambeyn dib loo eegayaa oo laga saarayaa haddii ay habboon tahay. Haddii aad rabto, waxaad u diri kartaa codka sawir kasta adigoo gujinaya meesha ka hooseysa sawirka. Dhibcaha celceliska codbixinta illaa iyo hadda ka yimid martida kale (marka ay khuseyso) ayaa sidoo kale lagu muujiyay hoosta sawirada. Ugu dambeyn, waxaad isticmaali kartaa badhanka fallaadha, dhinaca midigta hoose, si aad u bedesho sawir mid kale oo aad u dooratay mid ka mid ah noocyada isku midka ah.
Avibase ayaa la booqday 279,280,297 jeer laga bilaabo 24 Juun 2003. © Denis Lepage | Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah